CISM Exam Prep Archives - Dia manifakifa ny InfoSec fanadinana
Mey 12, 2018 /0 Comments/in CISM Exam Prep /amin'ny James Edge
Ny CISM na Certified Information Security Manager Certification dia iray amin'ireo malaza indrindra Fahazoan-dalana ho an'ny fiarovana mpitantana vaovao ary efa nahazo ny mihoatra noho ny 27,000 matihanina eran-tany. Miaraka recognitions toy ny lisitra toy karama ambony indrindra fanamarinana amin'ny alalan'ny Certification Magazine, ary ho voatanisa toy ny iray amin'ireo tena nitady certifications any Angletera, Aostralia sy ny U.S., ny CISM dia tsy maintsy manana ny hanitatra-ny asa amin'ny fiarovana vaovao fitantanana. Raha toa ianao ka mikasa ny handray ny fanadinana, ireto fampahalalana manaraka ireto dia hanampy anao amin'ny alehanao ianao.
CISM Certification fepetra takiana dia ahitana farafahakeliny dimy taona ny traikefa in-baovao fiarovana, farafahakeliny ny roa taona ny traikefa ho toy ny fiarovana mpitantana vaovao, ary, Mazava ho azy fa mandalo ny CISM fanadinana. Afaka roa taona hisolo ny asa ankapobeny traikefa amin'ny CISA, CISSP fanamarinana, na ny post-diplaoma-baovao mari-pahaizana eo amin'ny fiarovana na hafa mifandraika saha. Ianao koa tsy maintsy manaiky sy manaraka ny ISACA ny Code of Professional etika sy ny fianarana mitohy ny CISM Policy. Afaka misafidy ny handray ny fitsapana alohan'ny vita ny dimy-taona ambany indrindra ny asa traikefa, fa tsy afaka hanatratra fanamarinana ianao mandra hamita ny asa traikefa.
CISM fanamarinana miovaova arakaraka ny lany na tsia raha ianao no mpikambana ao amin'ny ISACA sy ny fomba mikasa fisoratana anarana. Ankoatra ny amin'ny fanamarinana fampiharana saran'ny ny $50, dia afaka manantena ny vola eo $625 ary $750 fa na an-tserasera na ny saran'ny fisoratana anarana tahadika na mandefa saran'ny fisoratana anarana ho amin'ny fanadinana. Azonao atao ny hanatevin-daharana ny ISACA ho an'ny lehibe fihenam-bidy amin'ny vidiny ireo na dia iray akory. Misy $50 saran'ny fanaovana fanovana ny voasoratra fanadinana sy ny $100 saran'ny noho ny fanodinana ny refund.
Misy maromaro Fampahalalam-baovao Fiarovana Courses afaka misafidy ny hitondra mba hanomana ny tenanao ho amin'ny CISM fanadinana, ary ny sasany aza mankany isaina ny asa CISM traikefa. CISA sy CISSP certifications azo swapped avy ho ambony indrindra ny roa taona ny asa traikefa. General Information fiarovana fanamarinana na ny fahavitan'ny iray vaovao fitantanana ny fiarovana ny andrim-panjakana fandaharana amin'ny fampiasana ny Modely ny Fandaharam-pianarana dia azo ampiasaina mba hisolo herintaona ny asa traikefa. Azonao atao ihany koa ny mianatra ny fitantanana ny fiarovana vaovao amin'ny oniversite isan-karazany mba hanatsarany ny fahalalana mba hanatsarana ny mandalo Score.
Raha manolotra ny ISACA maro ny famerenana sy ny fanofanana taranja, azonao atao ihany koa ny mitady hafa azo fiofanana amin'ny aterineto mba miborosy ny amin'ny fahaiza-manao, hianatra bebe kokoa momba ny fanadinana, ary tsara kokoa ny tenanao handeha hanomana ny fitsapana. Afaka miomana ny tenanao amin'ny aterineto taranja nomen'ny amin'ny ISACA na mampiasa fitaovana tsy ISACA natao mba hanatsarana ny mety tsy hahazo ny mandalo isa sy hanampy amin'ny fikarakarana fianarana.
CISM Practice Fanontaniana
Rehefa hisoratra anarana ho fanamarinana ny CISM, dia afaka mahazo ny maro ny fiofanana sy ny fitaovana fianarana mitarika mivantana avy amin'ny ISACA nefa tsy nisy afaka. Ireo fitaovana fanofanana ofisialy dia mety tsara ny fanomanana ny tenanao ho amin'ny fanamarinana, fa misy maro hafa safidy. Ny ISACA ihany koa ny manome boky amin'ny fanontaniana famerenana sy santionan-fanontaniana amin'ny valiny sy ny fanazavana. Ireo boky CISM ireo vaovao mahazatra isan-taona, fa dia ahitana 815 safidy maro fanontaniana Nalahatra araka ny fomba fanao sehatra amin'ny santionana feno fitsapana ny 200 kisendrasendra fanontaniana. Review boky ihany koa ny vaovao misy tokony handalo ny fanadinana fa tsy fanontaniana. Fanampiny fanampiny fitaovana ihany koa azo boky tsirairay. Famerenana taranja nomen'ny amin'ny ISACA no natao maneran-tany, ary mitovy ny lavany, fianarana fitaovana sy ny vola. Telo andro natao famerenana taranja bebe hanomana anao ho amin'ny fanadinana dia azo jerena mialoha ny fanadinana iray, fa afaka ihany koa ny maka betsaka kokoa famerenana na fohy ireo miankina amin'ny ny teti-bola sy ny zavatra ilaina. Famerenana ny ankamaroan'ny antokony avy amin'ny ISASCA mitentina farafahakeliny ny $250 ho an'ny tsy mpikambana, ary matetika dia indrindra ny $1,500. Ny ISACA manome maimaim-poana ihany koa ny fanombanana ny tena fanadinana amin'ny 50 fanontaniana, mamela anao mba hitsapana ny fahazotoanareo fa ny tena fanadinana.
Ny CISM Exam sy CISM Exam Dates
Afaka misoratra anarana ho amin'ny fanadinana CISM ao amin'ny ISACA namany Sary, izay mandoa saram samihafa mifototra amin'ny ny endriky ny fisoratana anarana, ary ny elanelan'ny tokoa ny ny fanadinana. Roa na telo herinandro mialoha ny fanadinana, ianao mandray fieken-keloka tapakila lisitra rehefa tsy maintsy maneho ny, izay tsy maintsy hitondra, ary ny fandaharam-potoana ho amin'ny andro. Tsy maintsy mitondra ny sary ID sy ny Admissions tapakila. Zava-dehibe ny maneho ny raha kely indrindra 30 minitra alohan'ny manomboka ny fanadinana, toy ny varavarana akaiky amin'izao fotoana. Raha ny fanadinana daty, ny CISM fanadinana misy indroa isan-taona tamin'ny Jona sy Desambra. Ny fitsapana aza maka adiny efatra, ary ahitana 200 fitambaran'ny fanontaniana, manome anao mihoatra ny iray minitra monja isaky ny fanontaniana. Ianao mahazo 4 hevitra isaky ny fanontaniana, ary mila mandalo farafahakeliny isa ny 450, na teny mafy 113 marina fanontaniana. Ny isa tonga lafatra ny 800 mitaky anao hamaly tsara rehetra 200 fanontaniana. Hahazo ny isa ao amin'ny taratasy iray volana sy herinandro, rehefa vita ny fanadinana. Rehefa mandroso sy manana ny isa, dia afaka mametraka ny CISM fampiharana mba ny fanamarinana.
Raha vao manana ny CISM fanadinana vokatra, dia afaka mampihatra ny CISM taratasy fanamarinana ny misintona sy pirinty ny fampiharana avy amin'ny ISACA namany Sary. Ianao koa mba hanolotra porofo dimy taona ny traikefa ny asa, amin'ny sonia fanamarinana avy amin'ny mpampiasa. Rehefa mandefa izany amin'ny, ISACA mandinika ny fampiharana sy ny, manome anao mahafeno fepetra, Namoaka ny fanamarinana. Tsy maintsy mandoa ny saran'ny fampiharana ny $50 alohan'ny alefaso amin'ny.
Ahoana no mizara ny CISM Exam
Amin'ny ihany 50-60% voalohany handalo tahan'ny , dia zava-dehibe mba handalina sy hianatra ireo fanontaniana ho amin'ny CISM eo anatrehanao maka ny fanadinana. Voalamina fianarana no zava-dehibe ho an'ny mandalo ny fanadinana, fa miankina amin'ny fahaizana sy ny ankehitriny fianarana tsara ny fakam-panahy fanontaniana, izay afaka hanombana amin'ny alalan'ny fanaovana ny ISACA fanombanana ny fitsapana, dia afaka manatona mianatra amin'ny fomba isan-karazany. Raha toa ianao ka akaiky, na akaiky ny mandalo isa, mianatra mampiasa ny ISACA ny nanome boky Mety hahasoa. Azonao atao koa ny mifidy ny haka iray amin'ireo famerenana misy taranja. Raha manana olana amin'ny fakam-panahy ara-nofo, dia afaka mifidy ny fahatelo-antoko fanomanana mba ho azo antoka anefa fa tsara ilay fitaovana sy vonona izany. Ny CISM tsy mitaky anao hianatra eo anatrehanao mampiseho ny, fa izany no zava-dehibe ny manao izany mba hahazoana antoka fa mandalo. Tamin'ny voalohany ambany mandalo isan-jato, fianarana, fanomanana ny tenanao ho amin'ny tsaina tsindry avy ny fitsapana, sy ny fanaovana antoka fa nanao tsara ny fanao maro fanadinana aloha ny zava-nitranga dia mamela anao ny tsara indrindra isa.
Best CISM Review Course Discounts & fampitahana
Ankapobeny Rating ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★
ARAHO FANONTANIANA 600 88 N / A N / A
ARAHO Fanadinana 52 65 Quizzes 5 Quizzes 4 Quizzes
VIDEO LESONA 590 mitantara Screens 16 Ora 14 Ora 15 Ora Video Lectures
CPE CREDITS 40 CPEs teo vita 16 CPE ny nanatitra Tsy misy Tsy misy
Format Online, Self-dava Online, Self-dava na Live Online, Self-dava Online, Self-dava
Antoka 6 Month Extension If You Don’t Pass 7 Day Money-Back Guarantee Tsy misy 7 Day Money-Back Guarantee
ONLINE ACCESS 180 Andro 180 Andro 180 Andro 30 Andro
ny https://crushtheinfosecexams.com/wp-content/uploads/2015/05/unnamed-2.png 500 500 James Edge ny https://crushtheinfosecexams.com/wp-content/uploads/2015/09/InfoSec-Logo1-300x41.png James Edge2018-05-12 06:06:532018-01-10 22:00:00CISM Certification